Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Samsung Galaxy Core e
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Samsung Galaxy Core iyo More Phones Samsung
Photos had iyo jeer waa xog muhiim ah oo ku saabsan naga phone sida ay matalaan xusuus our. Iyaga Luminta had iyo jeer waa xanuun. Samsung Galaxy muhiimka ah waa phone caan ah oo kala Timid camera wanaagsan oo qalab aad u wanaagsan in lagu soo qabto xusuus. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay sababo kala duwan oo aad lumiso sawiro.
1. Waxaa laga yaabaa in dib telefoonka sabab u updates ama arrimo gaar ah. Haddii aad jeceshahay in uu kaydiyo sawirada in lagu kaydiyo gudaha telefoonka aad, ka dibna ay sabab u tahay dib photos tani waa laga tirtirayaa. Waa sabab ugu badan, sida mudnaanta waa si loo badbaadiyo telefoonka hore iyo xogta ay dhacdo in arrimaha muhiimka ah.
2. kaararka SD musuqmaasuqa ayaa sidoo kale sabab ah in ka phone tirtirto laga yaabaa in sawiro. Kaararka SD uu ku kharribeen sabab u virus ama furin in la xaddido helitaanka kaarka SD aad. Haddii, aad uga takhalusi xogta, ma waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan sawiro aad iyo aad ayaa sidoo kale khatar ku waayaan photos inta lagu jiro nidaamka dalka looga saarayo fayraska.
3. tirtirka ah Shil sawirrada. Laga yaabaa in aad si qalad ah la tirtiro photos kaliya cadda bannaan qaar ka mid ah ee aad taleefan, iyo qof kale oo isticmaalaya telefoonka aad ayaa laga yaabaa in la tirtiro sawirrada. Waxaa jira sababo kala duwan oo la xiriira tirtirka buuggan.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Samsung Galaxy Core oo dheeraad ah
Waxaad shaleyso tirka sawiro aad gacanta ama si qalad ah laakiin dhammaantiin ma aha waa laga badiyay. Waa in aad xusuusatid in aan waxba maanta waxaa si buuxda u tirtirayaa. Waxaa jirta waddo dadka, kuwaasoo ka caawin kara in aad soo kabsado sawiradaada. The software xisbiga saddexaad Wondershare Dr.Fone for Android (kabashada xogta Android) waa software weyn si ay uga caawiyaan aad u baahan tahay in aad sawiro lumay. Halkan waxa ku jira qaababka ay:
Waxay kaa caawinaysaa in aad soo kabsado nooc kasta oo xog haddii qalab aan burburin. Waxaad iyaga ku soo kaban karto dhammaan ilaha kale sida laga helay ilo daruur.
Waxaad isticmaali doonaa computer inuu ka soo kabsado xogta, sidaa darteed habka ay tahay mid amaan ah. Waxay qaadataa dhawr daqiiqo.
Waxaad ku eegaan karo files ka hor inta aadan hawsha dib u soo kabashada. Sidaa awgeed, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan taas oo aydan xaraysan aad soo kabsaday iyo xaaladda. Tani waxaa inta badan loo baahan yahay feature halka kabsaday sawiro.
Wax kasta oo laga yaabaa in sababta lumista xogta. Noqo u warshad dejinta celin, nidaamka shil, qalab jabay ama biligleynaya ROM, waxaa soo kaban karto xogta.
Talaabooyinka waa sahlan oo ay raacaan iyo software u sahashay in ay kuugu toosin lahayd nidaamka ah.
Shuruudaha: cable la jaan qaada Samsung Galaxy Core, computer, Dr. Fone USB.
In la helo bilaabay barnaamij ku saabsan comptuer ka dib markii ay ku rakibidda. Waxaad arki doonaa suuqa kala ugu weyn waxaa ka mid ah sida soo socota.
Tallaabada 1. Isku aad Galaxy Core in kombiyuutarka
Ka hor inta isku xira qalab si aad u computer ah, in aad marka hore ka eegi kartaa debugging USB ah. Just uu raaco jidka haboon in aad qalab loo sameeyo:
Ka dib markii ay u suuro-debugging USB on qalab aad, aad u computer ku xidhi kartaa qalab aad iyo hadda u guuraan tallaabada xigta. Haddii aadan awood u debugging USB, aad arki doonaa suuqa kala barnaamijka hoose.
Tallaabada 2. Falanqeeyaan oo baarista Galaxy Core sawiro ku yaal
Ka hor inta aadan baar qalab aad, waxa loo baahan yahay si ay u falanqeeyaan xogta ku saabsan qalab aad marka hore. Riix badhanka Start si aad u hesho waxa ay bilowday.
Falanqaynta xogta keliya ee aad qaadan doontaa dhowr ilbidhiqsi. Dabadiisna, barnaamijka aad u horseedi doonaa in ay sameeyaan fasax ah shaashadda ka mid ah qalab aad: guji ogolow dhisayaa ilaa shaashadda. Markaas dib ugu computer ka guuraan oo guji Start in baarista Galaxy Core.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha & kabsado Galaxy Core sawiro
Skaanka aad qaadan doonaa wax yar ka dheer. Marka uu dhammaado, waxaad ka arki kartaa natiijo scan, halkaas oo ay dhammaan xogta la helay ay si fiican u abaabulan sida farriimaha, xiriirada, sawiro iyo video. Si aad ku eegaan sawirada aad, guji Gallery, ka dibna mid mid aad eegi kartaa sawirada. Dooro waxa aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer adigoo gujinaya bogsadaan.
Talooyinka la isticmaalayo Samsung Galaxy Core
1. Waxaad awood kartaa hab ka xanibeen in ay wargelinta soo xulay wicitaanka soo socda ka mid ah liiska loo ogol yahay. Waxaad ka heli kartaa hab ka xanibeen iyagoo hoos yaala qaybta qalabka gooba.
2. Dooro noocyada aad jeceshahay ee aad telefoonka ka category bandhigay. Waxaa noocyada kala duwan oo aad kala dooran kartaa.
3. Isticmaal feature joogo smart, oo laga heli karo oo keliya Samsung telefoonada android. Your screen marnaba noqon doonaa marka aad u daawado. Tag in uu soo bandhigo ka dibna si muuqaalada u joogtid Smart.
4. Ma dooneysaa inaad ogaato boqolkiiba batariga ka icon ugu sareeya ka tago kooxda in uu soo bandhigo iyo goobaha dheeraad ah si aad u hesho boqolkiiba doorasho bandhigay batting ah.
5. Had iyo jeer awoodin hab keydinta awood si loo badbaadiyo batari laakiin waxaa DHCP hoose iyo iftiin.
Sidee si looga fogaado in laga badiyay photos on Samsung Galaxy Core
Great si loo badbaadiyo sawiro aad ku saabsan telefoonka waa in ay si toos ah ku kaydi on daruur. Waxaad isticmaali kartaa adeegyada sida WordPress, iyo Skydrive inuu kaa caawiyo inaad ku kaydiso sawiro. WordPress u fiican yahay version android. Waxaa jira app WordPress u phone android suuqa kaliya download it oo ku xidh. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay ku shid fursadaha Upload ku saabsan core Samsung Galaxy ama android kasta.
1. Launch iyo calaamad in sanduuqa oo hoos aad ku saabsan telefoonka. Tag in goobaha ugu horeeya ee app DropBox.
2. Hadda hoos u dhaqaaq doorasho "shid Upload". Dooro sida aad rabto in aad geliyaan iyo waxa aad rabto in aad geliyaan. Geliyaan oo kaliya Wi-Fi waxaa lagu talinayaa haddii aadan si ay u isticmaalaan xogta qorshe ballaaran. Waxaa intaa dheer, in aad u ogolaato Upload ee photos iyo video. Eeg shaashada ee dhamaystiran goobaha.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa hab SkyDrive isku mid ah. Waxaa si toos ah u geliyaan mar kasta oo aad qaadato sawir cusub oo lagu kaydiyo ku saabsan telefoonka. Waxaad mar walba ka iibsan kartaa meel dheeraad ah oo ku saabsan DropBox haddii xadka free la dhaafo.
> Resource > Samsung > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Samsung Galaxy Core